साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर, यो कम्पनीलाई जिम्मा दिनुहोस” – Life Nepali
साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर, यो कम्पनीलाई जिम्मा दिनुहोस”
काठमान्डौ। कोरियाली कम्पनि एसवाई प्यानलले( SY Nepal) आफ्नो उत्पादन शुरु गरेको छ । फेब्रिकेटेड भवन निर्माण सम्बन्धि सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले यसै हप्तादेखि उत्पादन शुरु गरेको हो । नेपालका बिभिन्न जिल्लामा कम्पनिबाट विभिन्न रंगहरुमा छाना तथा वाल प्यानलहरु उत्पादन शुरु गरेका छन् ।बिभिन्न रंगको छाना र वाल २ देखि ६ इन्चीसम्म बाक्लो उत्पादन गरिने कम्पनीले जनाएको छ। शतप्रतिशत कोरियन प्रबिधि र लगानीमा स्थापना गरिएको सो कम्पनिको उत्पादनहरु भुकम्प प्रतिरोधी,सस्तो ,६० बर्ष टिकाउ हुने जनाइएको छ ।
कम्पनीले तीन सय स्क्वायर फिटको मुक्त कमैयाको क्याम्प, विराटनगरमा पाँच सय ८० स्क्वायर फिटको निजी आवास, मेलम्चीमा रिम्स नेपालको एक हजार स्क्वायर फिटको घर र एक हजार स्क्वायर फिटको ट्रेनिङ हल, आठ सय ८० स्क्वायर फिटको भवानी एकीकृत स्कुल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सुर्खेतमा टे«ड स्कुल, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको ट्रेनिङ हललगायत निर्माण गरिसकेको छ ।- थप जानकारीको लागी – यहाँ http://synepal.com/
Previous अष्ट्रेलिया काण्डको नालिवेली , को हुन् ति युबती ? यस्तो छ वास्तविकता” !
Next गर्लफ्रेण्डलाई लिएर फुटबल हेर्न गएका थिए, श्रीमतीले टिभीमा लाइभ देखेपछि…